1. Chigadzirwa zita / zita remadunhurirwa:
Epoxy waya waya pajira riya, epoxy unhani pajira riya, electrostatic unhani pajira riya, hydraulic Sefa kudzivirira pajira riya, hydraulic Sefa pajira riya, hydraulic Sefa simbi pajira riya, Sefa rutsigiro pajira riya, epoxy hwindo chinovhara pajira riya.
2.Kutsanangurwa kwakadzama kwechigadzirwa:
Maindasitiri epoxy akafukidzwa waya wesimbi anonyanya kushandiswa kune rutsigiro rukoko rwe hydraulic / mweya mafirita uye zvikamu zvemafuta. Civil epoxy mambure anonyanya kushandiswa ekurwisa-kuba masikirini munzvimbo dzakakwirira dzekugara. Kuumbwa kwaro ndiko kutora yakakosha epoxy mesh resin upfu pamusoro peiyo waya mesh yakarukwa kubva kwakasiyana simbi substrates kuburikidza nemagetsi emagetsi. Mushure meimwe tembiricha uye nguva, iyo epoxy resin poda inonyunguduka uye yakafukidzwa pamusoro peiyo substrate kuti iite dhi diki Yekudzivirira kupfeka. Kazhinji iyo substrate ine isina simbi mesh, aluminium alloy mesh, kabhoni simbi mesh. Iyo epoxy resin poda inosanganisira yemukati kana yekunze mhando, iyo inogona kugadziriswa uye kuvandudzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi (kusanganisira mamwe mavara).
3. Zvimiro zvechigadzirwa:
Mushure mekurapwa kwepamusoro, iyo yekumonera poindi yakagadziriswa, iyo mesh yunifomu uye yakaenzana, iyo yakarukwa uye weft yakatwasuka, hazvisi nyore kusunungura uye kuumbika, uye simba rekutsigira rinosimbiswa; iyo mesh pamusoro yakapfava uye yakapusa kuumbika; inogona kuumba akasiyana mavara epamusoro, iwo ruvara rwakatenderera uye yunifomu.
Zvina. Chigadzirwa chinobatsira:
Ansheng ine yakakwana chigadzirwa mashandiro simulation murabhoritari, kusanganisira pendi firimu kusimba bvunzo, penzura kuomarara bvunzo, munyu pfapfaidzo bvunzo, upfu adhesion bvunzo, kupfugama kuneta bvunzo, mafuta kuramba bvunzo, nezvimwewo Inonyanya kushandiswa epoxy nebwe upfu inouya zvinhu kuongorora, zvigadzirwa Maitiro ekuyedza mhando, uye nyowani yechigadzirwa kusimudzira kuyedzwa, chigadzirwa mhando chinogona kudzorwa.
Panguva imwecheteyo, YKM ine maviri akazvimiririra akavandudza epasirese-anotungamira makuru-epasi ekurapa ekugadzira mitsara. Iyo inoshandisa kure infrared uye gasi gasi inopisa mweya kutenderera modhi kugadzirwa. Iine hunhu hweyakagadzikana kupisa kuburitswa, kufanana, kubata kuri nyore, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nezvimwewo, uye kugona kwekugadzira kunogona kusvika zviuru makumi mashanu zvemamirioni / Izvo zvinobuda pagore zvinosvika mamirioni gumi nemashanu m2 pazuva. Iyo ine yekuzadza gasi ekurapa zvivakwa zvinosangana neanosvitsa zviyero mumakore gumi anotevera, achitsigira post-kugadzirisa kugona senge slitters, slicers, splicers, uye makumi matatu-akakurumidza emhando yekutanga mambure ekuruka michina.
1. Iyo inopesana nekunyudzwa kwemafuta uye ngura. Inogona kuyedzwa nemhando dzakasiyana dze hydraulic mafuta midhiya kutenderera pasirese panguva dzakasiyana tembiricha uye nguva, uye iyo yekumhara pamusoro haina shanduko. Iyo inokodzera tembiricha yakakwira uye yakanyanya kumanikidza yakasarudzika hydraulic firita zvigadzirwa.
2. Weathering kuramba, zvinoenderana neASTM B117-09 munyu bvunzo muyero, kuenderera kuyedzwa kwe96H yekumhara pamusoro pasina shanduko, inokodzera mafirita emhepo munzvimbo dzakaomarara nenzvimbo dzekunze;
3. Kubatisisa kwakasimba, kunogona kupfuura H giredhi penzura bvunzo, 1kg / 50cm bvunzo bvunzo, muchinjikwa-cheka bvunzo, anti-kuneta bvunzo;
4. Kukwirira kwakakombama, kunogona kupetwa nesimbi yesimbi ine nharaunda yekukomberedza kwe1mm, isina kutsemuka pamusoro;
5. Mushure mekunge chigadzirwa chatsemurwa, kumucheto kwetambo yemucheto haizodonha mushure mekunge iyo firimu yatsemurwa, uye kunamatira kweiyo yekupfeka yekumonera poindi kunogona kusvika 0.7kg.